Taule Galmada haweenka waaweyn 22.09.2021 22.09.2021 Comments
Calaamadaha cudurada galmada lagu kala qaado
Toos ah Dumar toos ah oo loo galmoodo galmada - Hibasex.com
Baahida galmada ee ragga da'doodu kala duwan tahay
Warbaahinta Galmada, Weerarrada Galmoodku Dhaawacaan Haweenka Siyaasadda
Golaha Farshaxanka Sare ee Columbus | Taageerista farshaxanka. Dhaqanka sii xoojinaya.
Maqaallo xiiso leh oo ku saabsan socdaalka adduunka
Share on Facebook Share on Twitter Inta badan dumarka haweenka ah waxay hubiyaan in nimanka ku jira galmadu ay leeyihiin baahiyo aan caadi ahayn. Fikradan waa khalad. Aragtida qof walba waa mid gaar ah. Haddii aad ka eegto aragtida aragtida cilmi-nafsiga, markaa aragtida ragga ee mawduucan waxay ku xiran tahay, qayb ahaan, qaybta da'da. Sidaa darteed, sidee ayay u baahanyihiin raga iyo dumarka da'doodu kala duwan tahay?
Da'daas, beddelidda lamaanayaasha galmada, waxay helayaan waayo-aragnimo, taas oo kor u qaada kalsoonida iyo kalsoonida qofka. Ragga da'doodu ka yartahay, waxay ku qaylinayaan jilbaha iyo kuwa aan la aqoon waxa ay caan ku yihiin. Laga soo bilaabo kaddib marka la soo gabagabeynayo in dareenka la isku dayo iyo abuuritaanka xiisaha naftooda, meel gaar ah waa in la siiyaa iyada oo aan la saadaalin Karin. Sida xiriirka galmada, halkan, aad muhiim u tahay asalka. Tani waxaa ka mid ah, tusaale ahaan, ciyaaraha ciyaaraha iyo wax kasta oo la xiriira iyaga.
Waana muhiim inaad la hadasho lammaanahaaga, jaceylkaaga, Vosphischenie, dabeecadiisa, muuqaalkiisa, sawirka, dharka, iwm. Qeybtan da'da this, nin wuxuu bilaabaa inuu ka tarjumo waxa ka muhiimsan noloshiisa, qiimeynta himilooyinka iyo baahiyaha. Sidaa darteed, marka ugu horeysa, ma muuqato muuqaal, laakiin awoodda aqooneed. Sidaa darteed, waxaa lagu soo gabagabeyn karaa in dharka uusan ahayn furaha soo jiidashada dareenka.
Waxyaabaha ugu muhiimsan waa maskaxda, maskaxda, kartida hadalka iyo dhageysiga, in ay noqdaan qof wada hadal wanaagsan. Sidaa daraadeed, xiriirka lala yeesho qof ka mid ah da'da noocaas ah, waa muhiim inaad tahay saaxiib. Ogolow sida ay tahay. Da'dadan da'da wakiilka jinsiga xooggan ayaa hore u go'aansaday naftiisa waxa ka sugaya deegaanka, iyo, dabcan, wuxuu ogyahay nooca haweenka uu u baahan yahay.
Waxyaabaha ugu muhiimsan waa in la fahmo waxa uu magacaagu sugayo, iyo haddii aad buuxin kartid shuruudaha iyo waxa laga filayo, ma ahan mid sahlan in la ciyaaro doorka qof kale. Marka la eego nolosha jinsiga, muddadaa horay loo qeexay, waxaa jira baahiyo iyo rabitaano la sameeyay.
Sidaa darteed, looma baahna in la abuuro wax cusub halkan. Waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado dhadhanka qof la jecel yahay, waxay u egtahay ma jirto, haddii ay noqoto mid muuqda ama dhar asal ah, halkan wax waliba waa shakhsi ahaan. Sidaa daraadeed, si xiriirka loo noqdo mid xooggan, waa lagama maarmaan in la helo furaha ninka oo dhan qorshaha. Ka weyn 45 sano Tani waa da'da marka jimicsiga jinsiga uu bilaabo inuu baaba'o. Sidaa daraadeed, xiriirada cakiran, waxaa lagama maarmaan ah in la abuuro jawi gaar ah.
Wakhti iyo wakhti wakhti si aad keligaa u noqotid, dareemo saaxiib, ku qabso niyadda ku haboon. Sidoo kale, si guul leh polovihotnosheny u baahan tahay in la ilaaliyo hab nololeed caafimaad leh, sababtoo ah da'da this, qabow wuxuu saameeyaa qabow. Sidaa darteed, haweenku waa inay kiciyaan baahida ragga ee qaab nololeed caafimaad leh.
Xiriirrada galmada waa in sidoo kale lagu qaadaa dabeecad ahaan iyo xaalad joogta ah, sababtoo ah fasaxyada dheeraadka ahi waxay ku xiran yihiin waxa isku mid ah. Iyo in dib loo bilaabo xiriirka dabiiciga ah mararka qaarkood waa mid aad u adag, sidaa daraadeed waxa fiican inaadan ogolaan. Xilligan da'da this jirin wax dareen ah, sidaas darteed waa lagama maarmaan in la beddelo waxyaabo yaryar, taas oo jaleecada hore u muuqato mid aad u muhiim ah.
Waxay noqon kartaa muuqaal nadiif ah, nabaro, qabasho, wax walba waxay kuxirantahay maskaxdaada. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad ku darto nooc "jest" si aad u dareen dareen ah.
Waxaa sidoo kale mudan in la ogaado in nin 45 sano ka dib uu dareensan yahay in uu u jahwareerayo cilaaqaadka erotic ah ma aha mid isku mid ah. Qaar badan oo ka mid ah qorshaha maskaxda ayaa diyaar u ah tan, taas oo saameyn karta ficilada, dabeecadaha, rabitaanka, halkan waxaad ku noqon kartaa asalka.
Sidoo kale, iyada oo da'doodu tahay sano ee la xiriirta nin. Aad bay muhiim u tahay inaad ku qanciso qaabkiisa, muuqaalkiisa, xoogiisa iyo dabacsanaantiisa.
Ku dhiiri geli dhammaan noocyada kala duwan ee kala badhkaaga iyo, aanad u malayn karin in wax cusub la keeno. Waa in la xusuusnaado in da'da 45 sano ee noloshu aysan dhammaanayn, lakiin haddaba taasi waa waqtiga fursadaha cusubi u furan yihiin kahor, fursad aad ku bilaabi kartid inaad ku noolaato. Haddii ay tahay dalxiis, safaro, dalxiis. Waxaad isku dayi kartaa wax cusub, wax kuu keeni kara dareenka wanaagsan ee adiga iyo ninkaaga.
Ha isku diidina arrintan. Ka dibna xiriirkaagu ma tagi doono, laakiin sanad walba waxay noqoneysaa mid xooggan. See also.
Share on Facebook Share on Twitter Si looga hortago dhibaatooyinka suurtagalka ah, waa inaad si joogto ah u booqatid dhakhtarka dumarka si loo baaro kahortaga iyo ogaado calaamadaha ugu horreeya ee cudurada galmada lagu kala qaado. Tixgeli cudurada caadiga ah ee maanta jira iyo in la go'aamiyo calaamadaha astaamaha ee cudurrada galmada lagu kala qaado ee dumarka.
Herpes genital Foomkan herpes ayaa ah midka ugu faafi karo oo adag in la ogaado. Badanaa, ma jiraan wax astaamo ah, iyo infekshanka jirrada galmada muddo dheer ma dareemayo dareemid.
Tilmaamo waaweyn: Nabaro biyo ah oo ku yaal xubnaha taranka. Casaan yar oo casaan ah oo u dhow futada iyo labiska. Nabaro furan oo u dhow xubinta taranka haweenka. Xanuun iyo cuncun, iyo sidoo kale, ma aha oo kaliya degaanka gudniinka, laakiin sidoo kale on miskaha iyo badhida. Burooyinka xubnaha taranka Condylomas ama burooyinka xubinta taranka ayaa u muuqda cudur infakshanka papillomavirus HPV.
Cudurada fayraskan waa in ka badan laba boqol, oo waxaa ka mid ah isbeddelada naf-gooyada ah. Si loo go'aamiyo pathogen gaar ah, waxaa loo baahan yahay baaritaanka shaybaarka dheddigga ah ee loogu talagalay cudurada galmada dumarka ah. Astaamaha: Noocyo yaryar, calaamado yar oo ku yaal xubnaha taranka iyo gudniinka. Cuncun iyo raaxo la'aan xubnaha taranka. Cudurka qoyan inta lagu guda jiro galmada sabab u ah dhaawaca burooyinka.
Chlamydia Nasiib darro, cudurkani wuxuu leeyahay calaamado asaasi ah. Calaamadaha ugu horeeya waxay muuqdaan 2 toddobaad kadib infekshanka.
Waxaa ka mid ah: Dareemo xanuun badan markaad kaadidid. Kordhin tirada tirada dheecaanka hoosta haweenka. Xanuunka caloosha hoose. Dhibaatada iyo xanuunada xubnaha taranka inta lagu jiro galmada. Waraabowga Marxaladda koowaad ee waraabowga, necrosis qaybta ama necrosis ee unugyada dheecaanka ah ee ku dhaca xubnaha taranka. Aagga maqaarka midab madow leh dusha sare ayaa la sameeyaa - chancre.
Marxaladda labaad, calaamadaha soo socda ayaa ka muuqda: Boogaha waaweyn ee jirka oo dhan waa guduud ama midab madow. Kordhinta heerkulka.
Laga soo bilaabo kaddib marka la soo gabagabeynayo in dareenka la isku dayo iyo abuuritaanka xiisaha naftooda, meel gaar ah waa in la siiyaa iyada oo aan la saadaalin Karin. Sida xiriirka galmada, halkan, aad muhiim u tahay asalka. Tani waxaa ka mid ah, tusaale ahaan, ciyaaraha ciyaaraha iyo wax kasta oo la xiriira iyaga.
Waxyaabaha ugu muhiimsan waa maskaxda, maskaxda, kartida hadalka iyo dhageysiga, in ay noqdaan qof wada hadal wanaagsan. Sidaa daraadeed, xiriirka lala yeesho qof ka mid ah da'da noocaas ah, waa muhiim inaad tahay saaxiib.
Ogolow sida ay tahay. Da'dadan da'da wakiilka jinsiga xooggan ayaa hore u go'aansaday naftiisa waxa ka sugaya deegaanka, iyo, dabcan, wuxuu ogyahay nooca haweenka uu u baahan yahay. Waxyaabaha ugu muhiimsan waa in la fahmo waxa uu magacaagu sugayo, iyo haddii aad buuxin kartid shuruudaha iyo waxa laga filayo, ma ahan mid sahlan in la ciyaaro doorka qof kale. Marka la eego nolosha jinsiga, muddadaa horay loo qeexay, waxaa jira baahiyo iyo rabitaano la sameeyay.
Sidaa darteed, looma baahna in la abuuro wax cusub halkan. Marka ugu horeysa, xannibaadaha ayaa quseeya toogashada sawir iyo fiidiyaha.
Mamnuuciddu way adag tahay oo waxay khusaysaa dhammaan qaybaha bandhigga. Ma qaadi kartid sawirro iyo muuqaallo kaliya ma ahan ficilka piquant laftiisa, laakiin sidoo kale xaalada ka dhex jirta machadka.
Iyo si dhagaystayaashu aan loo tijaabin, kaamirooyinka waxaa laga qaadayaa iyaga meesha laga soo galo machadka waxaana la soo celiyaa oo keliya dhamaadka showga. Naadiyada qaarkood waxaa laga yaabaa inay dhibaato ka haysato soo laabashada kaamirooyinka iyo taleefannada casriga ah, sidaa daraadeed inaad u qaadatid bandhigan oo kale waa ugu yaraan micno la'aan. Waxaa mahad leh jiritaanka xayiraadda noocan oo kale ah ee shabakadda in ay ku dhowdahay suurtagal in la helo sawir ah show galmada Thai xiran, in aan lagu xusin fiidiyow buuxa oo buuxa oo tayo sare ama ka yar ah.
Sababta oo ah nooca waxqabadka, kaliya daawadayaasha gaadhay da'da dadka intooda ugu badan ayaa ka qeyb geli kara bandhigyada caanka ah ee ka dhaca Thailand. Mamnuucidan ayaa lagu ixtiraamaa inta badan goobaha lagu caweeyo iyo xarumaha kale ee "dadka waaweyn". Waa inaadan isku dayin inaad u timaado dhacdo noocan oo kale ah iyo dad leh urur maskaxeed wanaagsan, oo aan diyaar u aheyn ama tijaabooyin geesinimo leh ama feker madadaalo leh oo ku saabsan muuqaalada fisqiga ah.
Dhaqan ahaan, madadaalada sida muuqaalka wiki ee Thailand ayaan lagu soo booqan dalxiisayaasha mabaadi'da adag ee diinta iyo anshaxa iyo anshaxa, si aysan u dhaawicin maskaxdooda oo aysan u tijaabin aasaaska anshaxa ee jira sanado. Tabaha iyo Tabaha: X Show 69 Barnaamijka Marxaladda hay'adaha sida X-show 69 ee Pattaya, jilayaashu waxay si furan ugu hawlgalaan dhammaan noocyada jinsi ee suurtagalka ah waxayna fuliyaan tabaha kala duwan ee xubnaha taranka ee ragga iyo dumarka, iyagoo si firfircoon u soo jiidanaya martida daawadayaasha si ay uga qaybgalaan.
Bilowga waxqabadka hal saac ah, kaasoo ka dhaca naadi ku taal Severnaya Street, oo ku xigta Saldhigga Baska ee Pattaya, Ragga Thai waxay ku heesaan heeso aan caadi ahayn laakiin heeso ku leh durbaanka xubnahooda taranka. Jilayaashu sidoo kale waxay ku madadaalin karaan dhagaystayaasha muusig madadaalo ah, laakiin dhagaystayaasha ayaa inta badan ka welwelsan ujeeddooyinka sida farsamada waxqabadka.
Lambarka muusikada waxaa soo raaca xeelado taxane ah oo ka yimaada dumarka ka shaqeeya galmada. Iyada oo cawradooda, gabdhuhu waxay muujinayaan waxyaabaha yaabka leh ee farshaxanka erotic - waxay qarxiyaan shumacyada, foorida seeriga, waxay bilaabaan fallaadho waxayna ciyaaraan ping-pong, iyagoo ku martiqaadaya daawadayaasha si gaar ah ugu faraxsan inay kubbadda garaacaan.
Khiyaamada ku jirta magaca "Coca-Cola", waxay umuuqataa, ma qarinayso wax aan caadi ahayn, laakiin ka dib markii ay ku daawatay baarka, tirada dadka doonaya inay tijaabiyaan cabitaankan la jecel yahay ayaa si aad ah loo yareeyay. Xaqiiqdu waxay tahay in atirishooyinka riwaayadda kacsiga, qaab aan gebi ahaanba u caddayn dadka caadiga ah, ay "ka nuugaan" dhalada Coca-Cola, oo ay biyaha caadiga ah ugu soo celiyaan. Cola gabadha si qarsoodi ah loo waayey ayaa markaa lagu shubayaa galaas, iyadoo ay ku wareersan yihiin daawade kasta iyada oo aan laga reebin.
Khiyaanada leh garbaha ay gabdhuhu iskaga soo saaraan iyaga hortooda dhagaystayaasha yaaban waxay sidoo kale umuuqdaan kuwo aad khatar u ah. Fiicnaanta garbaha ee aktarada waxaa lagu xaqiijinayaa iyadoo si xawli ah loo jaro waraaqaha ugu khafiifsan. Haddii taasi aysan aheyn mid ku filan, wariye oo goobjoog ka ahaa muuqaal la'aanta jinsiga ayaa qoray maqaal ku saabsan hadalka dhufashada - oo aan xitaa sheegin dhacdada.
Nasiib darro, waayo-aragnimadani waxa ay ahayd mid muujinaysa waxa ka imaan lahaa jidka Ujeedada Racfaanka Maxaa ka soo baxay markii ay u soo oresey Congress-ka dii way ka sii xumaatay. Bennett ayaa soo wajahday tartan suurtagal ah oo ka dhici doona Senator-ka Senegal State of Lisa Boscola, iyo Madaxa Boscola ee shaqaalaha Bernie Kieklak, ayaa si fiican loogu yaqaanay goobo siyaasadeed oo lagu soo bandhigo faallooyin aan la shaacin oo ku saabsan barta maxalliga ah.
Hadaladii uu u duulay Bennett hal shabakad online ah ayaa muujinaya heer jinsi ah iyo sadaqo haween badan oo ka mid ah musharaxiinta. Xitaa xayawaankeeda ayaa laga sameeyay caag. La-talinta Musharaxa Bennett wuxuu kuxirnaa nasiib darada, lakiin isaga oo iska kaashaday in ay hal arin kaliya ku jirtay hal blog. Haddii ay cillad ka dhigtay, waxa kaliya oo ay soo jiidan kartaa wax ay rumeysantahay in ay aad u yaraayeen dad badan.
Xaqiiqda dhabta ah, inta codbixiyeyaashu u socdeen si ay u arkaan? Taasi waxay ahayd qaladkii ugu horeeyay: Gaaladu ma xitaa billaabeyso sida aan dareemay. Laakiin ugu yaraan, waxaan u maleynayaa, waa uun faallo ku saabsan blog. Oo waxay ahayd - illaa iyo markii warqaddii maxalliga ahaa, Wicitaanka Subaxdii, uu go'aansaday in uu daabaco xigashada boggooda hore.
Iyo ma aha kaliya hal mar. Waxay u ordeen maalin kasta maalin kadib maalintii, oo leh sawir weyn oo aniga ila mid ah. Waan la yaabay oo waan ka xanaaqay weerarkan iyo weerarkan. Waxaan doonayay inaan dib ula dagaallamo; Waxaan doonayay inaan dacwad ka soo saaro. Laakin waxaa la iigu taliyay qareenkayga [ma'aha] La taliyeyaasha siyaasadeed ee ugu sarreeya ee qaranka ayaa ku adkeysanaya inaanan dhaleeceeynin warqadda, sababtoo ah waxay igu khasbanaan lahaayeen inaan mar dambe dabooli doono ololahayga.
thoughts on “Galmada haweenka waaweyn”
Shaktill on Galmada haweenka waaweyn
Copyright © 2021 Galmada haweenka waaweyn. Powered by WordPress. Theme: Accelerate by ThemeGrill.